प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने सहिदको सम्झनामा आज काठमाडौंको भद्रकालीस्थित सहिदगेटमा चारजना सहिदहरुको सालिकमा फूलमाला अर्पण गरिएको छ ।
सहिदको सम्झना (१२ तस्बिर)
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा पुगेर सहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । साे अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कालखण्डमा देशको रक्षाको निम्ति जीवन दिने अमर सहिदहरूकाे बलिदानको त्याग अतुलनीय भएको बताए । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत विभिन्न मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न लैनचौरस्थित सहिद स्मारक पुगे प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शृंखलाबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नागरिक आन्दोलनले टेकुस्थित पचलीघाटमा सहिद शुक्रराज शास्त्रीको सालिकमुनि विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा शिल्पी थिएटरले नाटक प्रस्तुति पनि गरेको थियो ।
८० वर्षपछि जब टेकुको रुखमा शुक्रराज फाँसीमा चढे …
शुक्रराजको नाटक प्रदर्शनपछि उपस्थित सहभागीहरु सडकमा पल्टिए। ‘डाइ इन प्रोटेस्ट’ नाम दिइएको उक्त प्रदर्शनमा उपस्थित सहभागीहरुले प्रतिगमनका कारण संविधानको हत्या भएको देखाउन सडकमा पल्टिएर आफूहरु पनि मारिएको भन्दै सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्।
सहिदको सालिकमुनि सुतेर विरोध
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सहिदहरूको बलिदानकै कारण नेपालीले अहिले निर्वाध नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि केपी ओली सरकारले धावा बोलेको भन्दै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध अहिले एक भएर लड्नुपर्ने वेला रहेको बताए ।
गंगालालको अन्तिम वाक्य ‘डोन्ट फर्गेट माई ब्लड’ भन्ने थियो : सिंह
गणतन्त्रका लागि आजीवन संघर्ष गर्ने शहीद दुर्गानन्द झाले सहादत प्राप्त गरेको ५७ वर्ष पूरा भएको छ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह चढेको गाडीमाथि बम आक्रमण गरेपछि उनलाई वि. सं. २०२० माघ १५ गते फाँसी दिइएको थियो। बिहीबार ५७ वर्ष पूरा भएको हो।
जसलाई शहीदको उपाधि पाउन ५२ वर्ष कुर्नुपर्‍यो